China Construction drill bit, multi-functional alloy drill, ceramiki tile glass drill bit, metal drill, Overlord drill, marble wall drill, cement carbide hole hụrụ ụlọ ọrụ mmepụta na ndị na-emepụta | Boda
Construction malite ịgba bit, multi-ọtọ alloy malite ịgba, seramiiki tile iko malite ịgba bit, metal malite ịgba, Overlord malite ịgba, mabul mgbidi malite ịgba, sikwuo carbide oghere hụrụ
Ọrụ ịkụ egwu ala bụ ụdị usoro usoro ịkpụ. Ihe dị mkpa iji mezue usoro ịkụcha ya bụ na ike nke ngwa ọrụ ga-adị elu karịa nke ihe eji arụ ọrụ.
Nkupu bit bụ ihe a na-ahụkarị na ndụ anyị kwa ụbọchị, mana ọtụtụ mmadụ nwere ike ọ gaghị ama nkọwa nkọwapụta. N'ezie, enwere ọtụtụ ụdị mkpọpu ala, nke a na-ahụkarị dị iche iche dịka ojiji ha dị iche iche, ya bụ, ụdị bit iji egwu ala. Common malite ịgba bit nwere ighikota malite ịgba, ewepụghị malite ịgba, miri oghere dakpuo, reamer, countersink, center dakpuo na na.
BOSENDA Multi-ọtọ ihe dakpuo / seramiiki tile dakpuo / alloy malite ịgba bit / triangle malite ịgba / iko dakpuo bit / mgbidi malite ịgba bit / titanium malite ịgba bit usoro ruru eru iji akuakuzinwo na ígwè, ígwè, ọla kọpa, ihe, aluminum, seramiiki tile, plastic, marble, iko gbara ọkpụrụkpụ, seramiiki, brik a gwakọtara, marble, granite na ihe ndị ọzọ siri ike.
YG8Cc carbide bit nwere mma eyi eguzogide na mmetụta ike karịa YG6 bit. Ngwaahịa ndị a nwere nkọwapụta nke nkọ eze udi, ezigbo onye mgbawa mwepụ, nke na-eme ya ọzọ ziri ezi ma dị mfe oghere na ukwuu nke ọma arụmọrụ nke oghere.
Ngwa nke malite ịgba bit:
Akụkụ nke ngwa nke malite ịgba: electric malite ịgba, odori malite ịgba, bench malite ịgba, mmetụta malite ịgba na ndị ọzọ ewepụghị mkpọpu ala igwe.
Nkọwapụta zuru ezu The multifunctional malite ịgba ibe n'ibe na-ọtụtụ-eji niile na-ewu saịtị. BOSENDA na enye ezigbo ihe eji egwu egwu dika ihe ichoro na ihe ichoro.
BOSENDA Multifunctional Triangle malite ịgba Bits / malite ịgba Bits / Marble Stone malite ịgba Bits, nke bụ inogide, na-egbusi agụba, ezigbo mgbawa mwepụ na mfe ọrụ. High arụmọrụ ịghasa mgbawa mwepụ, ezigbo akụkụ ahụ, adịghị arapara mma, egwu ọzọ n'ụzọ dị irè na-arụ ọrụ ndụ na-agbatịwo.
The titanium gold gburugburu ahụ bụ adabara electric aka akuakuzinwo, odori malite ịgba, bench osote, ewepụghị malite na na.
A na-ere usoro BOSENDA drill bit na mba niile. The malite ịgba ibe n'ibe usoro arụ ezigbo nzaghachi dị ka mgbe niile, na anyị ga-anọgide na-emesi ike na ngwaahịa mma dị ka mgbe niile.
Nke gara aga: Woodworking onu hụrụ, gypsum board onu hụrụ, ịkwanyere efere oghere hụrụ, osisi onu hụrụ, osisi akuakuzinwo, PVS malite ịgba
Osote: Electric hama malite ịgba bit, ihe malite ịgba bit, SDS, Max, Hex, percussion bit, perforator, malite ịgba ibe n'ibe